N-GUN JA WA: Autonomous regions ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသများ (လူမျိုးစုပြသနာဖြေရှင်းနည်း)
Autonomous regions ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသများ (လူမျိုးစုပြသနာဖြေရှင်းနည်း)
နိုင်ငံများစွာတွင် လူမျိုးစုများနေထိုင်မှုများပြားသော ပြည်မယ်များကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးသော ခေတ်ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို မျှတစွာကျင့်သုံးနိုင်သည့်နိုင်ငံများ (အမေရိကန်၊ သြစကြေးလျှား၊ကနေဒါ..နိုင်ငံများတွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အောင်မြင်သော်လည်း၊ တရုပ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် ပြည်နယ်တိုင်းကို စစ်မှန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးပါ။ ဗဟိုမှအုပ်ချုပ်ရတွင် ခက်ခဲလာသော လူမျိုးစုအင်အားကောင်းသည့် ဒေသများတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးများစနစ်ကို ထူထောင်ပေးထားသည်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ တရုပ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများကို လေ့လာကြည့်ပါမည်။ သူတို့ လူမျိုးစု ပြသနာဖြေရှင်းနည်းကို လေ့လာပါမည်။
ပြည်နယ်၅ခုကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး (လူမျိုးစုများအုပ်ချုပ်ခွင့်) ပေးထားရသည်။ ထိုဒေသများသည် လူမျိုးစုများ၏ မူလနေထိုင်ရာ နယ်မြေများဖြစ်ပြီး၊ တရုပ်လူမျိုးများ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ လာရောက်နေထိုင်ကြသော်လည်း လူမျိုးစုအင်အားကြီးမားလှသည်။ ထို့ကြောင့် တရုပ်အစိုးရက Autonomous Regions ဟု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတစ်ခု ဖန်တီးပေးထားရသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အုပ်ချုပ်ရေးခက်ခဲနိုင်ပြီး၊ လူမျိုးစုအဓိဂရုန်းများ၊ ခွဲထွက်ပုန်ကန်မှုများဖြစ်လာပါက တိုင်းပြည်နစ်နာမည်ဖြစ်သည်။ ယခု၂၁ရာစုတွင် စစ်အင်သုံး ချေမှုန်းမှုမှု ခေတ်မစားတောပဲ၊ လူနည်းစု၊ လူများစု အချင်းချင်း လေးစား၊ အသိမှတ်ပြုသော ခေတ်ကို စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူမှုရေးလွတ်လပ်ခွင့်များပေးပြီး အုပ်ချုပ်ကြသည်။ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ အထူးသဖြင့်၊ စစ်တပ်၊ရဲတပ်နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးတို့ကို ဗဟိုကချုပ်ကိုင်ထားသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ်များတွင် လူနည်းစုများသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်များ အလိုအလျောက်ရရှိသည်။ အာဏာရှိပါတီ၊တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီချည်း ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်အောင် လူနည်းစုများကို ကာကွယ်ပေးထားသည်။
Xinjiang ပြည်နယ်တွင် Uyghur လူမျိုးစုများက ၄၅%ရှိပြီး၊ သူတို့သည် မူဆလင်ဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တရုပ်အစိုးရက အထူးသတိထားအုပ်ချုပ်သည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများကို ခေတ်သစ်တရုပ်အစိုးရက အထူးငွေကုန်ခံ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်ချင်းစပ်နေသာ ယူနန်ပြည်နယ်ကဲ့သို့ပင် လူမျိုးစုပေါင်းများစွာရှိသည်။ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် လူမျိုးစုတစ်ခုက အင်အားမကြီးသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမလိုပေး။ Xinjiang Uyghur လူမျိုးစုများစွာရှိသဖြင့် အထူးအခွင့်ရေးပေးထားရသည်။ ၂၀၀၉တွင် မူစလင်ထကြွမှုများကြောင့် လူပေါင်း၂၀၀ကျော် သေဆုံးရသည်။ ၂၀၁၃ ဇွန်လတွင်လည်း လူ၂၃ဦးသေဆုံးသော အရေးခင်းဖြစ်ပြန်သည်။ လူဦးရေ သန်း၂၀ရှိသောပြည်နယ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ အရေးအခင်းများ မကြာခဏဖြစ်သော်လည်း တရုပ်အစိုးရက ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။
အခြားပြည်နယ်များမှာ တိဘက် ၉၂% လူမျိုးစုများကြီးစိုးသော်လည်း၊ လူဦးရေ ၃သန်းမျှသာရှိသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သည်။ နာမည်ကျော် လူအခွင့်အရေး ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လာမား၏ ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ သီးခြားလွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
မွန်ဂိုပြည်နယ်တွင် ၁၇%ရာနှုန်းမွန်ဂိုများ နေထိုင်ကြသည်။ လွတ်လပ်သော မွန်ဂိုနိုင်ငံကလည်း ရှိနေသောကြောင့်၊ တရုပ်အစိုးရက အထူးအုပ်ချုပ်ရသည်။ လူဦးရေ ၂၃သန်းရှိပြီး၊ အများစုသည် တရုပ် ဟန်မျိုးနွယ်များဖြစ်သော်လည်း လူနည်းစုအခွင့်အရေးပေးသည့်အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးထားသည်။
Ningxia ပြည်နယ်သည် မွန်ဂိုပြည်နယ်နှင့်တရုပ်ပြည်မကြီးကြားတွင်ရှိသည်။ များပြားလှသော လူမျိုးစုများရှိပြီး၊ လူဦးရေ ၆သန်းခန့်တွင်၊ အများစုမှာ မူဆလင်ဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးအချေပြုသော အဓိကရုန်းများ မကြာခဏဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်း အသင့်တင့်များပြားသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျာစွာလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးထားရသည်။
Guangxi ပြည်နယ်သည် တရုပ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် နယ်ချင်းစပ်နေသည်။ တရုပ်ဟန်လူမျိုးများက ၆၂ရာနှုန်း အများစုဖြစ်သည်။ ဒုတိယအများဆုံး၊ Zhuang လူမျိုးစုများက ၃၂%အထိရှိသည်။ မြန်မာနှင့်နယ်စပ်ဖြစ်သော ယူနန်ပြည်နယ်ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားများစွာ ရှိသည်။ ပြည်နယ်၏ လူဦးရေ ၄၆သန်းတွင် Zhuang လူမျိုးစုက ၁၄သန်းခန့်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးထားရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်စပ်နေသော ယူနန်ပြည်နယ်သည် လူဦးရေ ၄၅သန်းရှိပြီး၊ တရုပ်ဟန်လူမျိုးများက ၆၇% အများစုဖြစ်သည်။ ကျန်သောလူမျိုးစုများတွင် အများဆုံး ၁၁% Yi လူမျိုးစုဖြစ်သည်။ အခြား များပြားလှသောလူနည်းစုများမှာ တိဘက်-မြန်မာလူမျိုးစုတွင်ပါဝင်ပြီး၊ ကချင်လူမျိုးများလည်း ပါဝင်သည်။ ၀.၁% မှ ၂.၀% အထိ လူမျိုးစုများစွာရှိသော်လည်း လူများစုဖြစ်သော တရုပ်ဟန်လူမျိုးများက အုပ်ချုပ်ရေးကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ တရုပ်ဟန်လူမျိုးများမှာ ကွန်ဖြူးရှပ်အခြေခံ၊ ဘာသာမရှိသူများဖြစ်သော်လည်း တိုင်းရင်းသားများ၊သည် ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည်။ ခရစ်ယန်မစ်ရှင်များဖြင့် အများပြား ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်လာကြသည်။ မစ်ရှင်များမှာ Gladstone Porteous (from Australia)ယ Alfred James Broomhall, Janet Broomhall, Ruth Dix and Joan Wales of the China Inland Mission စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ယူနစ်ပြည်နယ်မှာ တိုင်းရင်းသားများစွာရှိသော်လည်း ၆၇% တရုပ်ဟန်လူမျိုးများက ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပေးရန်မလို။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပေးထားရသော ပြည်နယ် (၄)ခုရှိသည်။
1. Yogyakarta (1950) , 3.4 million people, 90% are Javanese, govern by Sultan
2. Aceh (2005) ,5million people, Acehnese 79%, most are Christian
3. Papua (2000) , 2.8 million people, many ethnic group, most are Christian
4. West Papua (2008) , 0.76 million people, many ethnic group, Christian 53%, Muslim 37%
ကချင်လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးလမုန်တူးဂျာနှင့် အဖွဲ့သည်၊ ၂၀၁၁ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် စည်းရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ရာ၊ မြန်မာအစိုးရမှ လုံးဝပါဝင်ခွင့်မပေးပါ။ KIA စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများပါဝင်ပြီး၊ ကချင်ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုကို အများဆုံးရသောကြောင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပေး။ တသီးပုဂလိကအဖြစ်လည်း ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ခွင့်မရပါ။ ဦးလမုန်တူးဂျာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရာ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အသေပျောက်များစွာဖြစ်ရသော Acehnese အာချန်ပြည်နယ် လူမျိုးစုအရေးအခင်းကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ခြင်းကို နမူနာ၊ အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြ၊ စာတန်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း၊ မြန်မာအစိုးရက မသိကျိုးနွန်လုပ်ထားသည်။ အချိန်မကျသေး၍ ဟု ဆိုနိုင်မည်လော။ အင်ဒိုနီးရှား ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အတုယူနေသည့်မြန်မာအစိုးရသည်၊ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်စဲစေခဲ့သည့် Acehnese ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နည်းလမ်းကို မြန်မာပြည်တွင်အသုံးချရန် ဘာများခက်ခဲနေပါသနည်း။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးသည့် ပြည်နယ်အရေတွက်မှာ များပြားလှသည်။ Bodoland (2003) · Chakma (1972) · Dima Hasao (1970) · Garo Hills (1952) · Gorkha Hills (1988) · Jaintia Hills (1972) · Karbi Anglong (1970) · Kargil (1995) · Khasi Hills (1952) · Lai (1972) · Leh (1995) · Mara္န(1972) · Tripura Tribal Areas (1982) and de facto autonomous area - North Sentinel Island (1947)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ အစိုးရသစ်ပြောင်းပြီးနောက်၊ အစိုးရနှင့်အဆင်ပြေသော ပြည်နယ်မဟုတ်သည့်၊ လူမျိုးနွယ်စုများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးထားသည်။ အန္နိယပုံစံ လူမျိုးစုငယ်လေးများဖြစ်သော ဓန၊ ကိုးကန့်ရျမ်း၊ နာဂ၊ ပလောင်၊ ပအို့ နှင့် ၀ လူမျိုးစုများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်များမှ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို မြန်မာနယ်စပ်ပြည်နယ်များဖြစ်သော အိန္နိယမှ နာဂ၊အာသံ၊မီဇို၊ မဏိပူရ စသည့်ပြည်နယ်များကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုကြီးများဖြစ်သော ကရင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ မွန်၊ ကယားပြည်နယ်များတွင် လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစုအဖွဲ့များ အင်အားခိုင်မာစွာရှိနေကြသည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို တောင်းဆိုနေကြသည်။ အစိုးရသစ်မှာ Myanmar Peace Council တည်ထောင်ပြီး၊ ပြည်နယ်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ခွဲဝေပေးခြင်း လုပ်ဆောင်နေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ဗဟိုမှသာ ချုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည်။
တရုပ်ပြည်ကို နမူနာထားပြီး ရေးရခြင်းမှာ တရုပ်အစိုးရသည် လူနည်းစုများကို အထူးသဖြင့်၊ စီးပွားရေးတွင် ကျေနပ်မျှတမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စီးပွားရေးတွင် လူများစု၊ လူနည်းစု ခွဲခြားမှုမရှိခြင်းသည် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လူမျိုးများ၏ အစိုးရသစ်သည် တရုပ်ဟန်လူမျိုးများကဲ့သို့ဖြစ်စေ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျဗားလူမျိုးစုများကဲ့သို့ဖြစ် မြန်မာပြည်နယ်များကို မည်ကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမည်နည်းဆိုသည်မှာ စောင့်ကြည့်ရမည်။ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံမှုများကို၊ ယုံကြည်မှုဖြင့် (ပွင့်လင်းစွာ) ရိုးသားစွာလုပ်ဆောင်ရပေမည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန်၊ထိုင်းနိုင်ငံများက ကြားဝင်ပေးသောကြောင့် အခက်ခဲမရှိပဲ အပစ်ခတ်ရပ်စဲခဲ့သော်လည်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အလွန်ခက်ခဲလုပ်ဆောင်ရသည်။ တရုပ်ပြည် ရေအားလျှပ်စစ် မြစ်ဆုံဆည်ရပ်တံ့သွားခြင်းလည်း အကြောင်းချက်များစွာတွင် တစ်ခုပါမည်။ တရုပ်ပြည်နှင့်အမေရိကန် အင်အားပြိုင်မှုတွင် ကချင်ပြည်နယ်သားများ ကြားညှပ်ခံရသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယခုအခါ ကချင် KIA နယ်မြေများတွင် နေရာယူထားသော မြန်မာစစ်တပ်သည် နောက်ဆုတ်မသွားသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများကို စတင်နေပြီး၊ တိုက်ပွဲကြီးများ ရပ်ဆိုင်းနေခြင်းသည် ကောင်းသောအလားလာဖြစ်သည်။ အင်အားကြီးသော မြန်မာစစ်တပ်မှ စတင်အလျှော့ပေးခြင်းမှာ မှန်ကန်ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် အလွန်ခက်ခဲစွာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်နေရခြင်းမှာ သယံဇာတကြိမ်စာဖြစ်ကြောင်း အားလုံးသိပါသည်။ စီးပွားရေးပွင့်လင်းမြင်သာသော ၂၁ရာစုတွင် အိန္နိယနှင့်တရုပ်ပြည်တို့သည် တဟုန်ထိုး စီးပွားတိုးတက်နေချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်နိုင်ငံကြားတွင် ရောက်နေသော ကချင်ပြည်နယ်သည်၊ ကုန်စည်ကူးသန်းခြင်းအတွက် အဓိကကျလာသလို၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကြွယ်ဝလှသော ကျောက်စိမ်း၊ ကျွန်းသစ်၊ ရွှေ၊ ရေအားလျှပ်စစ် ..စသည်တို့သည်၊ မက်မောစရာချည်းဖြစ်နေသည်။ အထူးသဖြင့် တပိန်ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းမှာ ကချင်လက်နက်ကိုင် KIA တပ်များကို တပြားမှမပေးဘူး၊ အင်အားသုံး မောင်းထုတ်သောအခါ နာကျည်းမှုများဖြင့် စတင်ခဲ့သော ကချင်-မြန်မာ တိုက်ပွဲများဖြစ်သည်။ နာကျည်းမှုဖြင့် ဓါတ်ငွေ့များ၊ စစ်လေယဉ်များဖြင့် အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သောအခါ ကချင်လူမျိုးများက လူမျိုးတုံးတိုက်ပွဲလားဟု မျက်ရည်ကျရသည်။ ကျားကုတ်ကျားကန်၊ အသေခံပြီး ခုခံတိုက်ပွဲဆင်ကြသည်။ ကချင်မြို့ရွာကြီးပေါင်း ရာနှင့်ချီ ပျက်စီး၊ မီးလောင်၊ ပြာကျခဲ့ရသည်။ ဘာမဟုတ်သည့် သယံဇာတကို တရုပ်ပြည်သို့ ရောင်းစားနေကြသည်။ သယံဇာတကျိန်စာ။
မြန်မာအစိုးရနှင့်ကချင်ခေါင်းဆောင်များ လူကြီးချင်းအဆင်မပြေမှုမှ၊ ကချင်မျိုးနွယ်စုများ တစ်သိန်းကျော် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဖြစ်ရသည်။ မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သား၊စစ်ဗိုလ် လူငယ်များစွာ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ လူမျိုးရေးအပြင် ကချင်အများစုသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာရေးလျှို့ဆော်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မူဆလင်ခွဲထွက်စစ်ပွဲကဲ့သို သေဆုံး၊ဒဏ်ရာရသူများ စာရင်းလုပ်ခွင့်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း လူဦးရေ ထောင်၊သောင်းမက သေကြေ၊ပျက်စီးခဲ့သည်မှာ ငြင်းမရနိုင်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနည်းလမ်းသည်သာ တစ်ခုတည်းသောနည်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရသစ် သိမည်ဖြစ်သည်။ လူမျိုးကြီးဝါဒ၊ စစ်ဝါဒီအစွဲကို ချွတ်နိုင်ဖို့၊ လူလူခြင်းလေးစားမှု အထူးလိုအပ်နေပါသည်။ ယခုအခါ လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်များက လက်နက်မစွန့်ပဲ၊ စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်များကို ရရှိထားကြပါသည်။ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကို ခွဲဝေယူရတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ကျေနပ်မျှတမှုရှိအောင်လုပ်ရမည်။ ထိုမှ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု ခိုင်မာလာပြီး ညီအစ်ကို တိုင်းရင်းသားအားလုံး လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲခြားသည့်၊ သာယာဝပြောသော ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သို့ ချီတက်နိုင်မည်ဖြစ်သတည်း။
Posted by Witmone at 5:43 AM